Plain Weave သည်အသုံးအများဆုံးနှင့်အရိုးရှင်းဆုံးဝါယာကြိုးအထည်ရက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုင်ဝါယာကြိုး (ဝါယာကြိုးအရှည်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေသောဝါယာကြိုး) တစ်ခုစီသည်ဝါယာကြိုးများတစ်လျှောက် ဖြတ်၍ ဖြတ်သွားသော (ဝါယာကြိုးများဖြည့်ပါသို့မဟုတ်သေနတ်ဖြင့်) ၉၀ ဒီဂရီထောင့်ဖြင့်တည့်တည့်ဖြတ်သွားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောလျှောက်လွှာများရှိပါသည် ...
1. ခေါက်အမှတ်အသားများ: ဖျက်လို့မရပါဘူးဝါယာကြိုးကွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအစင်းအမှတ်အသားများ။ ၂။ Broken Holes: မျက်နှာပြင်တွင်အပေါက်တစ်ခုဖြစ်စေရန်အတွက်နေရာတစ်နေရာတည်း၌ကွဲအက်နေသောဝါယာကြိုးများ။ 3. Rusty အစက်အပြောက်: ချေးခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲအရောင်။ မျက်နှာပြင်အရောင်အစက်အပြောက်။ 4. Broken ဝါယာကြိုး: တစ်ခုတည်းဝါယာကြိုး၏အပိုင်းအစ။ ၅ ။
A: Cloth ဆိုသည်မှာအပြိုင်ဝါယာများအကြားပွင့်လင်းသောနေရာကိုဖော်ပြသည်။ B က: linear လက်မနှုန်းအဖွင့်အရေအတွက်အဖြစ်ဖော်ထုတ် Mesh Count ။ ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုအထည်ဟုခေါ်သည့်အထူးအထည်မဟုတ်လျှင်နံပါတ်တစ်လုံး၊ အပိုင်းတစ်ပိုင်း၊ သို့မဟုတ်နံပါတ်နှစ်ခုအဖြစ်ပြနိုင်သည်။